We Fight We Win. -- " More than Media ": ဒီပဲယင်း မှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်များ အောင့်မေ့ ဘွယ်အခန်းအနား
ဒီပဲယင်း မှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်များ အောင့်မေ့ ဘွယ်အခန်းအနား
ဒီပဲယင်း ၉ နှစ်မြှောက်အခန်း နားကို မပျက်မကွက် တက်ရောက်ကြပါ။ ဒီပဲယင်းမှာ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲ။ ဘယ်သူက လုပ်ခဲ့သလဲ။ ဒီပဲယင်း သွေးမြေကျခဲ့တဲ့ ၀ိညဉ်တွေကို ဘယ်သူတွေက မေ့ ထားကြပြီလဲ ။
ခင်ဗျား အဲဒီလို သွေးထိုးနေတာ တိုင်းပြည်ကိုချစ်တာလား? ဒီအချိန်မှာ ဒါတွေကိုမေ့ထားသင့်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတစ်ကယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်ရင်ပေါ့။ အဲဒါ ခင်ဗျားနဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် ကွာခြားချက်ပါပဲ။သူထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာ နေရပေမဲ့ သူ့မှာအာဃာတမရှိဘူး။ ခင်ဗျားကတစ်ချိန်လုံးပြည်ပမှာနေပြီး လက်ခမောင်းခတ်နေတယ်။ ခင်ဗျားမှာ ရှိတာ ဘာလဲသိလား.........."အတ္တ"
မင်းကိုနိုင်က အချောင်သမား မဟုတ်ဘူးလို့ မင်းကိုဘယ်သူပြောလဲ ။ ဒါတွေကိုဒီအချိန်မှာမေ့ထားလိုက်ပါလို့ ပြောရအောင် မင်းမိသားစု သတ်ခံရတဲ့ထဲ မပါဘူးမဟုတ်လား ။ မိုးသီးမှန်တယ်။ မင်းတို့ အချောင်သမား ဒူးချောင်သူရဲဘောကြောင်သူတွေသာ ကြံ့ဖွတ်ကို လျှက် ။ အေး အောင်ဆန်းစုကြည်လဲပါတယ်အဲဒီထဲမှာ။
you two are __ losers.What have you two done for Burma. Stop complaining like idiots.Ifaperson can forget, u should praise that person. Ifaperson can not forget, just try to put yourself in to their boots and give sympathy and give himabig hug.There is nothing to be blame about because they had been suffered is not easy to forget.OK junta's ball lickers?